सहकारी Archives ~ Banking Khabar
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको २१ औं शाखा धनुषाको महेन्द्रनगरमा
बैंकिङ खबर । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सले थप नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । फाइनान्स कम्पनीले कार्तिक २६ गते २१ औ शाखा धनुषा जिल्लाको महेन्द्रनगरमा शाखा बिस्तार गरेको हो । हाल वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी तथा जगेडा कोषमा रु. १ अर्ब १९ करोड, ,निक्षेप संकलन रु. ५ अर्ब ४४ करोड तथा कर्जा लगानी रु. ३
सहकारीको महत्व आवश्यकता र बिकासक्रम (हेर्नुस् रिपोर्टमा)
बैंकिङ खबर । सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुद्धारा आर्थिक लगानी गरी सोमा व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो । सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गदर्छ । सहकारी समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान हो
पोखरा फाइनान्सको थप नयाँ शाखा मणिग्राममा
बैंकिङ खबर । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ५, मणिग्राममा थप नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । थप नयाँ शाखा विस्तारसंगै फाइनान्सले २२ औं मणिग्राममा शाखा संचालनमा ल्याएको हो । संस्थाले शाखा सञ्जाल एवं ग्राहक सेवा विस्तारको निमित्त विभिन्न जिल्लाहरुमा शाखा विस्तार गर्दै आइरहेको छ । मणिग्राममा संचालन शाखामार्फत् संस्थाले निक्षेप संकलन,
स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज र नेपाल फाईनान्स बीच सम्झौता
बैंकिङ खबर । स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससिटी) र नेपाल फाईनान्स लिमिटेड बीच भुक्तानी र फछ्र्यौटको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन् । स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजको रजिष्टर्ड कार्यालय बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजको तर्फबाटका.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश मास्के र नेपाल फाईनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उद्घबराज थपलियाले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
बेष्ट फाईनान्स र एससिटि नेटर्वक बीच चिप बेस एटिएम कार्ड सेवा सम्झौंता
बैंकिङ खबर । बेष्ट फाईनान्स कम्पनी र एससिटि नेटर्वक कम्पनीविच चिप बेस एटिएम कार्ड सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौंता भएको छ। आज कार्तिक ३ गते यस सम्बन्धी सम्झौंतामा बेष्ट फाईनान्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारी र एससिटी नेटर्वक कम्पनीको तर्फबाट कामू प्रमूख कार्यकारी अधिकृत दिपेश मास्केले संयूक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन । यो
सहकारीमा दोहोरो सदस्यता हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
बैंकिङ खबर । सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता सम्बन्धि हालै गरिएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर भएको छ । सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले रिट दायर गरेका हुन् । सहकारी संस्थामा एक सहकारीका एक सदस्यको नीति अघि सारएिको थियो । सो को कार्यान्वयन हुन
कोरोनाका कारण विन्धवासिनी सहकारीका अध्यक्ष शिव पराजुलीको निधन
बैंकिङ खबर । कोरोनाका कारण नेफ्स्कून सदस्य तथा इटहरीस्थित विन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष शिव पराजुलीको निधन भएको छ । ६० बर्षिय पराजुली सहकारीकर्मी सँगै होटल व्यवसायी पनि हुन् । विगत ९ बर्षदेखि सहकारीमा रहेका पराजुलीले गत २ बर्षदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका थिए । सुनसरीको धरानस्थित वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसीयूमा
श्री लालीगुराँस सहकारी २२औँ वर्षमा
बैंकिङ खबर । पुल्चोक स्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले २१ औँ वर्ष पुरा गरी २२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले संस्थाकै लगानीमा असोज १५ गतेबाट श्री लालीगुँरास दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेको बताएका छन् । संस्थाको दुधजन्य पदार्थ बिक्री शुरु भइसकेको छ। संस्थाले आजैबाट
एउटै व्याक्ति दुई वटा सहकारीको सदस्य बन्न नपाइने, अटेरी गरे कारवाहि
अबदेखि एक व्याक्ति एउटै प्रकृतिका दुई वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने भएको छ । सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न
१४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने सहकारीलाई कार्बाही गरिने
बैंकिङ खबर । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कार्बाही गरिने बताएका छन् । सन्दर्भ ब्याजदकार विषयमा सहकारी पत्रकार समाजले गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाही गरिने बताए । गत वर्ष १६ प्रतिशत भन्दा माथि व्याज लिन नपाउनेगरी सन्दर्भ व्याजदर तोकीएको थियो भन
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सलाई ‘आईपीओ’ निष्काशन गर्न दियो बोर्डले अनुमति
बैंकिङ खबर । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर ‘आईपीओ’ निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटअनुमति पाएको छ । बोर्डबाट कम्पनीले सोमबार आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीले हाल कायम जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । आईपीओ निष्काशन पछि कम्पनीको
अब सहकारी सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने सफ्टवेयर
बैंकिङ खबर । अब सहकारी संस्थाका ग्राहकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट सफ्टवेयरले नै रोक्ने भएको छ । डेटम सिस्टम्सले विकास गरेको ग्राहकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट रोक्ने ट्रस्टएमल सिस्टम सहकारी संस्थाको लागि पनि उपलब्ध गराउन समझदारी भएको हो । सो समझदारी पत्रमा डेटम सिस्टम्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गिरिश दाहाल
सहकारीमा ठग्ने प्रबृति हटेन, ५ करोड ठगीमा न्युरोडका सहकारी प्रमुख पक्राउ
बैंकिङ खबर । सहकारीको साढे ५ करोड बढी ठगी गरेको आरोपमा सहकारीका प्रबन्धक नै पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-२१ न्युरोडस्थित नौलो परिवेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिका-३१ बस्ने ४४ वर्षीय राजकाजी खड्गीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनी माथि सहकारीको प्रबन्धक पदमा कार्यरत रहँदा
सहकारीको साढे ५ करोड भन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा सहकारीका प्रबन्धक नै पक्राउ
बैंकिङ खबर । सहकारीको साढे ५ करोड बढी ठगी गरेको आरोपमा सहकारीका प्रबन्धक नै पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-२१ न्युरोडस्थित नौलो परिवेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिका-३१ बस्ने ४४ वर्षीय राजकाजी खड्गीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनी माथि सहकारीको प्रबन्धक पदमा कार्यरत
सबैजसो सहकारीद्धारा भदौ १५ गतेसम्म सेवा बन्द
बैंंकिङ खबर । अधिकाँस सहकारी संस्थाले भदौ १५ गतेसम्मका लागि कारोबार बन्द गरेका छन् । केही सहकारीले अति आबश्यक पर्ने सदस्यलाई कारोबार गर्नेगरी बन्द गरेका छन् भने कतिपयले सम्पूर्ण काम रोकेका छन् । सूचना प्रकाशित गरी ती सहकारीहरुले आफ्नो कार्यालयमा टाँस गरी भदौ १५ सम्म सेवा बन्द गरेको जनाएका छन् । यस अघि सबै सहकारीहरुलाई